महि’नावारी स’मस्या भएको महि’लाहरुलाई धेरै फाइदा गर्छ रा’जमाले।
रोचक महि’नावारी स’मस्या भएको महि’लाहरुलाई धेरै फाइदा गर्छ रा’जमाले।
सम्पादक : कविता
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: राजमा, सजिलै पाइने, सजिलै पकाउन सकिने, स्वा’दिलो हुने । त्यती मात्र होइन । राजमा स्वा’स्थ्यको हि’साबले उत्तिकै गु’णी खानेकुरा पनि हो ।
आ’इरन तथा भि’टामिनले भरिपूर्ण राजमाले स’म्पूर्ण श’रीरलाई पो’षण प्रदान गर्छ । साथै, यसमा रहेको ए’न्टीएजिङ त’त्वले उमेरको प्रभाव कम गर्नुका साथै अ’नुहा’रलाई सुन्दर देखाउँछ ।
यसबाहेक, पनि राजमाका अन्य धेरै फाइदा छन्, जसको से’वनले अनुहार लामो समयसम्म ज’वान देखिन मद्दत गर्छ । उ’मेरको अ’सर कम गर्छ रा’जमामा लो फ्या’ट प्रोटिन हुन्छ ।
त्यसैले, यो मु’टु सम्बन्धि रो’गमा निकै ला’भकारी मानिन्छ । यसमा रहेको प्रो’टिन नामक तत्वले क्या’न्सरसित ल’ड्न तथा उमेरको प्रभाव कम गर्न मद्दत गर्छ । राजमामा पाइने भि’टामिन ‘ए’ले अ’नुहारलाई जवान राख्छ । यसले उमेर सम्बन्धि स’मस्यालाई पनि कम गर्छ । नियमित रुपमा यसको सेवनले आफै ब’दलाव महसुस गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न औ’षधीमा प्रयोग हुन्छ रु’मेटिक आ’र्थराइटिस तथा पि’शाब सम्बन्धि स’मस्याको औ’षधी बनाउन राजमाको प्रयोग हुन्छ । राजमामा पर्याप्त मात्रामा ए’न्टीअ’क्सिडेन्ट तत्व हुन्छ ।
श’रीरको को’शिकाको मर्मतका लागि ए’न्टीअ’क्सिडेन्ट राम्रो मानिन्छ । यसको से’वनले श’रीरको वि’षाक्त ह’ट्नुका साथै छा’ला चम्किलो हुन्छ । क्या’न्सरबाट बचाउँछ राजमामा फ्ले’वोनाइड्सको साथमा के’म्पफ्रेल र क्यु’रेस्टिन हुन्छ जसले क्या’न्सरको को’शिकालाई बढ्नबाट रोक्छ ।
सातामा तीन देखि चार पटक राजमाको सेवनले महिलालाई स्त’न क्यान्सरको स’मस्या हुनबाट बचाउँछ । सिमित मात्रामा रा’जमाको से’वनले पा’चन कि्रया चुस्त हुनुका साथै पे’ट स’म्बन्धि स’मस्या हुने सम्भवना कम हुन्छ ।ग’र्भाव’स्थामा लाभदायक ग’र्भाव’स्थामा राजमाको से’वनले ग’र्भमा रहेको शिशुको मु’टुको विकास सही तरीकाले हुन्छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले जनाए अनुसार यसले शि’शुलाई आ’ज्माबाट पनि जोगाउँछ ।
यसबाहेक, यसले स्कि’नमा चमक ल्याउँछ । महि’नावारी सम्बन्धि सम’स्या राजममा फ्या’ट्स तथा को’लेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ भने भाइ’बर तथा प्रो’टिनको मात्रा धेरै हुन्छ । नियमित रुपमा यसको से’वनले महिलाका म’हिनावारीका क्रममा हुने स’मस्याबाट राहत मिल्छ । रजनो’वृत्तिको समयमा म’हिलाहरुलाई राजमा निकै जरुरी हुन्छ ।
म’धुमेह राजमाको ‘ग्ला’इसेमिक इ’न्डेक्स’ कम हुन्छ । त्यसैले, यसको से’वनले र’गतमा चि’नीको मात्रा बढ्दैन । बरु यसमा रहेको फा’इबरले रगतमा चि’नीको मात्रालाई स्थिर राख्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै, यसमा रहेको क्या’ल्सियम, म्या’गनीजले ह’ड्डीलाई मजबुती प्रदान गर्छ भने यसमा रहेको म्या’ग्नेसियमले मु’ट सम्बन्धि रो’ग लाग्नबाट बचाउँछ ।
मेरो कपडाको लम्बाई हेरेर छिमेकीले जर्ज गरे भन्ने सुन्दरीका बोल्ड लुक, हेराैँ १५ तस्बिर
कविता - November 26, 2020 0
तलेगु र तमिल फिल्मकी सफल अभिनेत्री ले छिमेकीहरुले उनको कपडालाई लिएर जर्ज गर्ने गरेको बताएको छिन् ।
जानीराखौ , यी पाँच सपना झु’क्किएर नि कसैलाई नभ’न्नुहोला ! पछुताउनु पर्ला…
सपना देख्नु सामान्य हो, तर कस्तो सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ भन्ने कुरो चाँही महत्वपुर्ण हो । हरेक दिन हेरक मानिसले फरक फरक सपना देख्ने गर्छन् ।
थाहा छ ? पूर्व प्रेमीलाई सम्झेर रुँदा घट्छ तौल ?
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने गर्दछन् । भावनात्मक रुवाईले तौल घटाउन सहयोग गर्छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ ।
जाडोमा खु’ट्टा फु’टेर है’रान हुनुहुन्छ ? यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्।
कविता - November 25, 2020 0
चि’सो मौसममा हा’तगोडा फु’ट्ने सम’स्याबाट सबैजसो नै पी’डित हुन्छन् । जा’डोमा चि’सोको कारण सु’ख्खापन, छा’ला फु’ट्ने जस्ता सम’स्या देखापर्छन् ।
कोलम्बियामा थपियो ब’ज्रपात: विमान दु’र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु,
कोलम्बियामा एउटा विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । भिल्लाभिसेन्सियोबाट ताराइरा जाँदै गरेको डाउग्लास डीसी–थ्री विमान दुर्घटनामा परेको हो ।
“म छोरी मान्छे भएर, मैले दिएको दागबत्तीले नै मलाई चिनाएको हो’ सपना रोका मगर
‘जब म पहिलो पल्ट काठमाण्डौको महाराजगन्जस्थित त्रीवि शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा पुगेकी थिएँ । त्यतिबेल म निकै डराएँकी थिए र अत्तालिएकी पनि थिएँ ।
बेपत्ता भएका डीएसपी हाेटेलमा युवतीसँग यस्ताे हर्कत गर्दागर्दै प्रहरीकाे टाेली पुगे पछि…
इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका इन्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) भरतबहादुर चौधरी मंगलबार राति एकाएक सम्पर्कविहीन भए।
बेलायती प्रसारण संस्था (बिबिसी) ले तयार पारेको २०२० का प्रभावशाली महिलाको सूचीमा म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना रोका मगर परेकी छन् ।
मेरो कपडाको लम्बाई हेरेर छिमेकीले जर्ज गरे भन्ने सुन्दरीका बोल्ड लुक,...